ဇူလိုင်လ 2018 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဇူလိုင်လ 2018
နေအိမ် > ဇူလိုင်လ 2018
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပမှာခရီးသွားအကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်ကနေရာတိုင်းရထားရှိရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဒါဟာတိုက်ကြီးသွားလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လူများစွာရဲ့အကြိုက်ဆုံး၏အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်အတောအတွင်းဖြစ်ပါသည်. လူတွေကသူတို့ယူရန်ဆုံးဖြတ်မတိုင်မီအချို့မေးခွန်းများမေးပြုပါ…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဒီရထားခရီးသွားလာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဒါဟာအများအပြားရဲ့ပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်သူမျှသံသယရှိပါတယ်. ရိုးရိုးသားသား, ရထားဖြင့်ခရီးသွားလာသူမည်သူမဆိုကအပေါ်လုံးလုံးအရူးသွား၏! အဘယ်ကြောင့်? ကခမ်းနားင်သောကြောင့်! အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလေယာဉ်စီးဆန့်ကျင်, မသက်မသာဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်, သို့မဟုတ်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ယင်း၏အကြီးအသောမြေဆီလွှာပေါ်သို့သငျသညျခြေလျင် step ယခုအချိန်တွင်နေဖြင့်ရထားအီတလီနှင့်အတူလွခံရဖို့အဆင်သင့် Get. သမိုင်း၏မြေယာ, ခမ်းနားဗိသုကာ, လွှမ်းမိုးသောယဉ်ကျေးမှု, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောကြော့, ခေတ်မီ, ပြီးတော့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့လူတွေဟာမင်းနောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်အောင်သင်မှတ်မိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်!…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ရထားအားဖြင့်ဟော်လန် Tulip ရာသီတွေ့ကြုံခံစားဖို့အမှန်တကယ်မဆို Self-လေးစားနွေရာသီခရီးသွားမယ့်ပြက္ခဒိန်ပေါ်မှာမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်. တစ်လဒါမှမဟုတ်ဒါနှစ်တိုင်းများအတွက်, Flevoland ၏ပြည်နယ်၏လယ်ကွင်းထက်ပို7ရောင်စုံပန်းပွင့်တစ်ဦးလှပကျယ်ပြန့်ပင်လယ်ထဲသို့အသွင်ပြောင်းနေကြတယ်…